ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားသင့်လား။ - Hello Sayarwon
ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါဆိုတာက ခြင်ကနေတဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ ​Culex အမျိုးအစား ခြင်ကြောင့် ဖြစ်ပွားတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးပေါ့။
ကူးစက်တာကတော့ ရောဂါပိုးရှိတဲ့ ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ စတာတွေကို ကိုက်ထားတဲ့ ခြင်ကတဆင့် လူဆီကို ကူးစက်တဲ့ ရောဂါပါ။ ၁၈၇၁ ခုနှစ်က ဂျပန်နိုင်ငံမှာ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတဲ့အခါ ဦးနှောက်မှာ ပိုးပြန့်ပြီး ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်စေတာကြောင့် ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါလို့ ခေါ်တာပါ။
ဒီရောဂါပိုးက ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များပြီး လူကြီးတွေမှာလည်း ဖြစ်ပေါ်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှ၊ ပစိဖိတ်ကျွန်းတွေနဲ့ ကမ္ဘာ့ အရှေ့ဖျားနိုင်ငံတွေရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးပါ။
ဒီရောဂါက ကြီးမားတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ သေဆုံးတာမျိုး ဖြစ်နိုင်သလို ဦးနှောက် ထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊ မှတ်ဉာဏ် နဲ့ အာရုံကြော ထိခိုက် ပျက်စီးတာတွေကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးသာ ရှိသေးပြီး ကုသနိုင်မယ့် ဆေးဝါးမရှိသေးတာကြောင့် ကြောက်စရာ ကောင်းလားဆိုရင် ကောင်းတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ စစ်တမ်းတွေအရ နှစ်စဉ် အာရှဒေသမှာ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ အရေအတွက် ၆၈၀၀၀ ခန့်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရသူတွေထဲက ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က သေဆုံးနေရပါတယ်။ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရသူ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က အသက်မသေပေမယ့် ဦးနှောက်ထိခိုက် ချို့ယွင်းသွားတာ၊ အာရုံကြောစနစ်တွေ ထိခိုက်သွားတာလိုမျိုး ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ခံစားကြရပါတယ်။
ဘယ်သူတွေက ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ များလဲ။
ဒီရောဂါပိုးက အသက်အရွယ်မရွေးကို ကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် မွေးကင်းစ ကလေးငယ်တွေ၊ ငယ်ရွယ်တဲ့ ကလေးတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါ။
ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါကာကွယ်လို့ ရမလား။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါက ကုသနိုင်မယ့်ဆေး မရှိသေးပေမယ့် ကာကွယ်ဆေးတော့ ရှိပါတယ်။ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ ဆိုးရွားမှု ရလဒ်တွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ဆိုရင် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ကာကွယ်လို့ ရပါတယ်။
ဂျပန် ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေးက Japanese encephalitis virus လို့ခေါ်တဲ့ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ရောဂါပိုးရှိတဲ့ ခြင်ကိုက်ခံရတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ရောဂါမဖြစ်အောင် ခုခံ တိုက်ထုတ်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
အသက် ၉လကနေ စထိုးလို့ရပြီး primary immunization (ကနဦး ကာကွယ်ဆေး)အနေနဲ့ တစ်ကြိမ်ထိုးထားရပါမယ်။ အချိန်ကြာကြာ ကာကွယ်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အသက် ၁၈နှစ်အထိအရွယ်တွေက တစ်နှစ်နေရင် ထပ်ထိုးသင့်ပါတယ်။ (၂နှစ်အထိ လက်ခံပါတယ်။) ထပ်ဆောင်းထိုးထားပြီးရင်တော့ ခုခံအားက ၃နှစ်လောက်ထိပဲ ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။
လူကြီးတွေမှာတော့ တစ်ကြိမ်ထိုးပြီးရင် ၅နှစ်နေမှ ထပ်ထိုးဖို့ လိုပါမယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ မိသားစု အားလုံး ထိုးထားသင့်တာပါ။ ဘေဘီလေးတွေ။ သားသားမီးမီးတွေ နဲ့ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေ ကတော့ မဖြစ်မနေ ထိုးထားသင့်သူတွေပေါ့။ ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားတာနဲ့အတူ ခြင်ကိုက်မခံရအောင် သေချာ ကာကွယ်ဖို့လည်း လိုပါမယ်။
ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ အသိဉာဏ် လုံးဝချို့ယွင်းသွားတာ၊ စကားမပြောနိုင်တော့တာ၊ မလှုပ်ရှားနိုင်တော့တာ၊ တက်တာ၊ နားလေးသွားတာလိုမျိုး နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်သလို အဆိုးဆုံးအနေနဲ့သေဆုံးတာမျိုးအထိ ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ကုသဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါကို ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီး ကာကွယ်တာက ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်းပါ။
ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက် ထိရောက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ကာကွယ်လို့ ရနေတဲ့ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး သေချာကာကွယ်ပါလို့ အကြံပြုလိုက်ပါရစေ။
Japanese Encephalitis Vaccine https://www.cdc.gov/japaneseencephalitis/vaccine/index.html Accessed Date5November 2020
Japanese encephalitis https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/japanese-encephalitis Accessed Date5November 2020
How immunization works? https://www.sanofi.com/en/your-health/vaccines/how-immunization-works Accessed Date5November 2020
CDC. Understanding How Vaccines Work https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/conversations/downloads/vacsafe-understand-color-office.pdf Accessed Date5November 2020
You, your loved ones and vaccination https://www.sanofi.com/en/your-health/vaccines/value-of-vaccines Accessed Date5November 2020
CDC. Centers for Disease Control and Prevention. Understanding How Vaccines Work. [Online] 2018 [Cited: April 2019] https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/conversations/downloads/vacsafe-understand-color-office.pdf Accessed Date5November 2020